Ubumfihlo Yethu Igama Lokuqala | PIVX
Ubumfihlo Yethu Igama Lokuqala
Ubumfihlo bunjani uhlobo olungaqhelekanga. Sithemba ukuba singacingi ngalo xa kungengxaki, kwaye sihlala sinokucinga ukuba asibukeli. Eyinyaniso, ngelanga, ayikho into elula.
Inyaniso kukuba, sonke sijongwa kwaye sihlaziywa imihla ngemihla. Iinkampani ezinkulu ezifana ne-Google, i-Facebook, kunye ne-Apple sonke sijonge ngokugqithiseleyo ukuba izenzo zabo zizinzi okanye zijolise kuphela “ekuphuculeni amava omsebenzisi”. Ihlabathi liphela lifumene i-slap ebukhali ebusweni bayo ngendlela ye-Facebook yangoku imayini ye-minas fiasco. Ngoko ngoku ixesha elifanelekileyo lokuthetha malunga nokuba kutheni sifuna ubumfihlo ukuba singabi yinto ethile ye-paranoid, kodwa kumntu oqhelekileyo.
Unokukhusela njani ubumfihlo bakho?
Kukho isizathu sokuba sineengcango kunye neefestile zeefestile ezindlini zethu. Ukubeka nje, ngenxa yokuba asenzi nto iphosakeleyo akuthethi ukuba kufuneka sisasaze ngokucacileyo zonke izenzo zethu, okanye sivumele iinkampani zenkampani eziqhutywa ziinjongo zokufumana inzuzo epheleleyo kwimpilo yethu yangasese.
Akunjalo nje iinkampani zoshishino zentlalo kunye nenkampani ye-tech ejongayo. Ngokuchasene noko, inkqubo yezemali yelizwe lonke esilungele ukusijonga ngokukhawuleza, ukuba akunjalo nangakumbi. Akanelisekanga nje ngegama lomsebenzisi kunye neendawo ze-GPS, iinkqubo zezimali ezifana neengxelo zemali zentengo zemali kunye neebhanki ziyazi nkcukacha zethu ezintle kakhulu. Bayazi iinombolo zee-ID zorhulumente, iinombolo zepaspoti, idilesi, iinombolo zefowuni, kunye nayo yonke into ephantsi kokuthi “yazi umthengi wakho” okanye imithetho ye-KYC.
Yingakho sikhetha ukusebenzisa i-PIVX xa sisebenzisa iimali zethu. Ngenxa yokuba sikhetha ukuzimela, kwaye kubaluleke kakhulu, sikhetha ubumfihlo.
Ngoko ngenxa yokuphulwa kweentsholongwane zentlalo yeentembeko ezinkulu, masithathe ixesha elithile ukuba sihambe ngaphaya kwee-five tiers zobumfihlo ezibonelelwa yinkonzo ye-PIVX.
Njengoko sitshilo nje, nayiphi na intsebenzo oyenzayo kunye nebhanki ayikho yangasese. Ngokuchasene noko, elo xesha okanye imali oyinike yona kwiWikikileaks, okanye kwiqela lepolitiki elidlulileyo okanye ukunyakaza ngekhadi lakho lokudibanisa i-Visa, ngoku liyinxalenye yengxelo yakho esigxina. Ibhanki kunye neenethiwekhi zokucoca iintlawulo ziya kugcina kwaye zikhumbule le ngcaciso ngonaphakade. Ayikukugcina nje kuphela, kodwa ibophelelwe kubuni boburhulumente bakho. Ngoku masithi iminyaka ukusuka ngoku igama lakho liphuma kwi-FBI yophando engenzi lutho nawe. Iirekhodi zakho zebhanki ziza kutsalwa, kwaye ukuthengwa kwakho okusemthethweni, ngokuthe ngqo kuyingxenye yerekodi kawonkewonke.
Kwi-PIVX, senza izinto ngendlela eyahlukileyo. Nabani na, naphi na kwihlabathi, bangenza isikhwama se-PIVX kwikhompyutheni okanye kwiselula kwisigqitha. Ukuba i-PIVX isikhwama asibophelelwanga ngokusemthethweni nasiphi na iirekhodi ze-ID malunga nawe okanye nawuphi na umntu ohamba naye kunye naye. Ngaliphi na ixesha, unokwenza isikhwama esitsha kwaye uqale kwakhona ngaphandle kwekhonkco kunoma yimuphi umsebenzi owenziwe ngaphambili.
Konke kuhle kwaye kulungile, unokuba uzicingela kuwe, kodwa kuthekani ngobuchwepheshe obukrakra njengohlalutyo lwe-blockchain? Ngaba i-FBI ne-NSA ayizange ibukele ngokukhawuleza inethiwekhi ye-bitcoin? Ngaba i-bitcoin ayisebenzisi kwimimiselo efanayo? Yingakho sithathile izinto ezithe gqolo.
Masithi uthande i-PIVX (kwaye ngubani ongekho?) Kwaye ufuna ukukunceda ukugcina inethiwekhi kwaye mhlawumbi ufumane imivuzo ethile kwinkqubo. Iindaba ezilungileyo unako ukwenza oko ngaphandle kokufuna ukutyhila nantoni na malunga nokuba ungubani okanye uhlalaphi kwihlabathi. Ukuthatha inxaxheba kwinethiwekhi kunzima njengokukhuphela isikhwama kunye nokufumana i-PIV.
Ngaba ufuna ukuhambisa izinto uze usebenze i-masternode? Akukho ngxaki. Njengokuba uqhuba i-wallet kunye ne-staking, ungasebenzisa i-masternode kungekho mfuneko yokunciphisa ukungaziwa kwakho.
Ngaba ngokwenene uyazibuza? Ungakwazi ukuqhuba i-PIVX masternode phezu kwenethiwekhi ye-TOR.
Ukuchitha imali yangasese.
Kwiinyanga ezimbalwa ezedlule, i-PIVX yaxhuma enye yeenkqubo eziphambili kunye neendlela ezintsha zokugcina ubumfihlo kunye nokungaziwa kwi-networkchain network. Ukusebenzisa inkqubo esiyibiza nge-zPIV, nabani na kwi-network ye-PIVX bangathumela imali ngokupheleleyo. Ukuba umntu uzama ukubheka imvelaphi yeemali, abayi kufumana nto.
Le nkqubo yabucala iyasebenza kwenye yezona ziprotheksi zobuninzi eziphambili kunye neziphambili zazo zonke, ezaziwa ngokuba yiZerocoin. Nangona ukuphunyezwa kweZerocoin esiyisebenzisayo kuyinkimbinkimbi kakhulu, unokufunda ngoku ngakumbi malunga nephepha lethu elisemthethweni malunga neprotocol yangasese ye-PIVX.
Kodwa ingongoma, ukutshintshana kwi-PIVX usebenzisa i-zPIV kukhusela ubumfihlo bakho nokungaziwa ngokucacileyo. Iyenjenjalo ngaphandle kokufuna ukusebenzisa nayiphi na into efana nokuxuba imali okanye ukuxhomekeka kwinani elikhethiweyo labanye abantu abathembekileyo abangaba yingozi. Hayi, i-PIVX yintsebenziswano yangempela, kwaye nabani na abanekhono lobuchule bezakhono abanokwazi ukubheka ikhowudi yethu baze baqinisekise.
Enye yezixhobo ezintsha ezithandekayo ezivela kwi-PIVX ngo-2018 yinkalo yokuba abathathi-nxaxheba baxhamle kwaye bafumane imivuzo kwiinqununu ze-ZPIV.
Kuze kube ngoku, i-zPIV isele ibe luncedo njengendlela yokuthumela i-PIVX ngokungachazwanga. Ukuba ufuna ukuthatha inxaxheba kwinethiwekhi yethu yangasese kwaye ufumana imivuzo, kwakudingeka ugcine ukubhala kwakho kwi-PIV. Kodwa ngohlaziyo olutsha kwiphepha le-wallet
3.1, abasebenzisi banokungena kwaye bathathe imivuzo kwiiyunithi zabo ze-zPIV.
Oku kubaluleke kakhulu kuba abantu abaninzi abasebenzisa inkqubo ye-zPIV, ngokugqithiseleyo ukungaziwa kuya kuba. Ngoku, ama-stakers rhoqo aya kukhuthazwa ukuba abambe i-zPIV engayi kuqinisa kuphela isivinini senethiwekhi kunye nokuzinza kodwa kuya kuphucula kakhulu ukungaziwa komntu wonke.
Kuza kube namhlanje, i-PIVX isona kuphela i-cryptocurrency ebonisa ukungaziwa ngokubanzi kunye nobungqina bentengo, exhaswa liqela elinamandla labathuthukisi kunye nabadlali be-cryptographer. Uninzi lweemali zemali zobuncwane ezikhuphisanayo lithembele kwixesha elidlulileyo kunye nokuchithwa ngokuchanekileyo kwemigodi yobungqina. Apha apha kwi-PIVX, sasifuna ukwenza into engcono, ngoko senza ubugcisa beephupha zethu ukuba buyenze.
Ungayekeleli ushiye ubumfihlo bakho
Ngethemba, i-Facebook yokuthungula iya kuba yinto yesibini kunye nesilumkiso kuluntu jikelele. Asikwazi ukuthemba amashishini kunye neebhanki ngeenkcukacha ezizimeleyo, ezibucayi. Ubuncinane, kungekhona xa sinokukhetha. Yingakho uluntu lwethu lukhetha ukusebenzisa i-PIVX, kwaye sikhetha ukusebenzisa i-zPIV ukugcina ukungaziwa kwethu kukhuselekile kunye nokuzimela kwethu kwezimali.
Ubumfihlo buyilungelo lomntu, kodwa lilungelo lokuba simele siphakame kwaye sikukhusele yonke imihla. Iinkampani ezinkulu ezimele zizuze ekusebenziseni ulwazi lwethu aziyi kuphelela nje kwaye zisinike ubumfihlo obufanelwe. Sidinga ukunamathela kunye nokuzikhusela thina. Kwaye kukho enye yezinto eziphambili zePIVX. Ngaloo nto, makhe sivale enye ingcaphuno enye, eli lixesha elincinane kunelo lokugqibela:
“Ukuphikisana ukuba awukhathalele ilungelo lokuzimela ngasese ngenxa yokuba ungenanto yokufihla ayikho into ehlukile kunokuba uthi awukhathalele ngentetho yamahhala ngenxa yokuba ungenanto.” U-Edward Snowden, owayengumkhonkcla weNSA.